दबंगका निर्देशक कश्यपले बलिउडको पोल खोलेः भने, ‘ सलमान खानको परिवार विषालु सर्पको टाउको’ उनीहरुको धम्कीले धेरैले आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन ! सलमान खान र परिवारले यस्तो सम्म गर्ने रहेछ भित्रभित्रै खुल्यो पोल ! – live 60media
दबंगका निर्देशक कश्यपले बलिउडको पोल खोलेः भने, ‘ सलमान खानको परिवार विषालु सर्पको टाउको’ उनीहरुको धम्कीले धेरैले आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन ! सलमान खान र परिवारले यस्तो सम्म गर्ने रहेछ भित्रभित्रै खुल्यो पोल !
← स्वयम्भूको सुन्दरता (फोटो फिचर)
आफ्नो जन्मभुमी पटनामा सुशान्तको अस्ती बिसर्जन गरिदै ! →
०७८ जेष्ठ ०२ गते आइतबार, आज तपाईहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल कस्तो छ हेर्नुहोस…